Isifo Somoya - Izinsizakusebenza Zabahlinzeki Bokunakekela Okuyinhloko - GAAPP
Ikhaya>Izinsizakusebenza Zomhlinzeki Wokunakekela Isifo Somoya
Izinsizakusebenza Zomhlinzeki Wokunakekela Isifo SomoyaIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-03-24T12:31:04+01:00
I-International Primary Care Respiratory Group (IPCRG) usungule iphakethe lezinsizakusebenza zokuxhasa ochwepheshe bezokunakekelwa okuyisisekelo ukuhlinzeka ukunakekelwa komuntu siqu kubantu abadala abane-asthma. Ukunakekelwa okwenziwe ngezifiso kukhomba okubaluleke kakhulu kumuntu ngamunye futhi kuqinisekisa ukuthi bathola ukunakekelwa okwenzelwe izidingo zabo nezintandokazi zabo. Ngokunikeza ukunakekelwa okwenzelwe wena uqobo, odokotela bangasekela iziguli ukuthi zithuthukise ulwazi, amakhono nokuzethemba ukuphatha impilo yazo. Lokhu kubaluleke kakhulu njengoba ubufakazi bukhombisa ukuthi ikhono leziguli lokuphatha i-asthma linomthelela omkhulu emiphumeleni yazo kubandakanya ukulawulwa kwesifuba somoya, ukukhushulwa ngamandla, ukwamukelwa ezibhedlela kanye nekhwalithi yempilo.
Isisetshenziswa sokufunda sisesimisweni se-PowerPoint slide set engasetshenziswa ngabantu njengethuluzi lokuzifundela kanye nabahlinzeki bemfundo yokunakekelwa okuyisisekelo njengengxenye yokuqhubeka nezinhlelo zemfundo yobungcweti. Ukungena nokulanda i-PowerPoint iya lapha.
Umsizi wedeskithophu No 9: Ukunakekelwa okwenzelwe wena: abantu abadala abane-asthma
I-IPCRG isungule i-Desktop Helper ekuhlinzekeni ukunakekelwa komuntu siqu kubantu abadala abane-asthma. UMsizi weDeskithophu unikeza izeluleko ezisebenzayo zabelaphi abasebenza ekunakekelweni okuyisisekelo.
Ukwenza ngezifiso i-IPCRG DTH
I-Desktop Helper iyatholakala nangeSpanishi. Siyabonga kozakwethu be-GRAP ngokusisekela kwabo ekuhumusheni. Uhlobo lwesiSpanish luyatholakala ngokuchofoza isixhumanisi: I-Atención personalizada: I-Adultos con asma
I-Desktop Helper iyatholakala nangesiPutukezi. Siyabonga kozakwethu i-GRESP ngokusisekela kwabo ngokuhumusha. Uhlobo lwesiPutukezi luyatholakala ngokuchofoza isixhumanisi: Ama-personalizados e-Cuidados: Ama-Adultos com asma
Isikhundla Iphepha No 5: Ukwenza Icala Lokunakekelwa Kwabantu Abadala Abane-Asthma
Leli phepha lokuma lichaza ukunakekelwa okuyisisekelo kwesifuba somoya. Sichaza ukunakekelwa okwenzelwe wena futhi sehlukanise lokhu nomuthi owenzelwe wena. Sithi indlela ebanzi yokunakekelwa okwenzelwe wena ngeke izuzise umuntu kuphela, kepha nezinsizakalo zezempilo kanye nabantu, ngokwenza ngcono ukusetshenziswa kwemithi futhi ngaleyo ndlela kuncishiswe imfucuza, ukulimala kanye nokusetshenziswa okungenzeka kugwemeke kokunakekelwa okuphuthumayo. Sifingqa lokhu njengokuthuthuka kwenani. I-paperthen yenza izincomo mayelana nokuthi abenzi bezinqubomgomo, abafundisi bemitholampilo nabaholi beziguli bangasiza kanjani ekuguqulweni kwamasiko nokwelashwa okudingekayo ukwenza ukunakekelwa komuntu siqu kwabantu abadala abane-asthma nezinye izifo ezingapheli zokuphefumula. Iphepha lesikhundla liyatholakala lapha: Ukwenza Icala Lokunakekelwa Kwabantu Abadala abane-Asthma
IPhepha Lesikhundla liyatholakala nangeSpanishi. Siyabonga kozakwethu be-GRAP ngokusisekela kwabo ekuhumusheni. Uhlobo lwesiSpanish luyatholakala ngokuchofoza isixhumanisi:Izimpikiswano zomusa del tratamiento personalizado para adultos asmáticos
Ubufakazi obusetshenziselwe ukuthuthukisa lezi zinsizakusebenza
Ukwazisa ukuthuthukiswa kwalezi zinsizakusebenza, i-IPCRG ithole futhi yabuyekeza ucwaningo olufanele mayelana nokunakekelwa komuntu uqobo, umuthi owenziwe waba ngowakho kanye nokwenza izinqumo okwabelwana ngazo ngesifuba somoya nezinye izimo ezingalapheki. Imininingwane yalolu cwaningo iyatholakala ngokuchofoza isixhumanisi esingezansi.
17-10-06 ubufakazi bokunakekelwa komuntu uqobo
Zonke izinsiza nabanikeli bephrojekthi bangatholakala lapha: Izinsizakusebenza ze-IPCRG ekuNakekelweni Kwabantu Abadala Abane-Asthma